WittyParrot: Akụrụngwa Ama maka Ahịa na Nkwukọrịta Aka | Martech Zone
WittyParrot: Akụrụngwa ihe ọmụma maka Ahịa na Nkwukọrịta Marketingzụ ahịa
Friday, February 5, 2016 Tọzdee, Febụwarị 4, 2016 Douglas Karr
Na a akụkọ si McKinsey Global Institute, Ọnọdụ akụ na ụba mmadụ: Unkpọghe uru na arụpụta site na teknụzụ mmekọrịta, ndị nchọpụta chọpụtara na onye ọrụ ihe ọmụma na-egbusi awa 28 kwa ọnwa na-achọ ma na-eweghachi akwụkwọ. Naanị 10% nke akwụkwọ dị na ụlọ ọrụ nwere usoro bara uru. Ruo 80% nke ahịa na azụmaahịa azụmaahịa ejighị ya.
A na-agbagha ndị na-ere ahịa site na ijide ozi izipu ozi na nkwụsi ike n'ofe nzukọ ahụ, yana ịtụle ojiji ya na ịdị irè. Ahịa na nkwado ndị ahịa na-agbagha site na ịchọta na ịgbasa ozi ahụ na atụmanya na ndị ahịa.
Onyeka Onwenu na - eche ihe ịma aka a ihu na njikwa ọdịnaya na imepụta ihe nrụpụta nke na-eme ka ọsọ, nkwụsi ike na njikwa nke nkwukọrịta nzukọ na-agbasa.
Site na interface kensinammuo, ndị ọrụ nwere ike bulite, kesaa, ma chọta ọdịnaya dị mfe, tinye ya n'ime usoro kwesịrị ekwesị, ọbụnakwa tụọ ọnụọgụ nzaghachi na ya.
WittyParrot na-enyere ndị otu aka aka ịbawanye uru site na:
Chọpụta na ijide ozi atomized nke ahụ bara uru nye ndị na-azụ ozi.
Kekọrịta ozi ahụ n'ụzọ na-agbanwe agbanwe gafee ụlọ ọrụ ma hụ na njikwa njikwa nke ozi ahụ ma na-enyere ndị ọrụ aka ịmepụta Wits nke ha (Ihe ọmụma ihe ọmụma).
Inye usoro na-agbanwe agbanwe ahụmahụ onye ọrụ na ngwaọrụ ọ bụla, nke ahụ na - adịkarị, ka ndị mmadụ nwee ike ịrụ ọrụ na ntanetị ma ọ bụ na ntanetị.
Na-enyere ndị ọrụ aka ngwa ngwa chọta, dọrọ na dobe ihe omuma banyere akwukwo, ihe ngosi ma obu email nke ha na aru oru ya.
Ndepụta irè nke ozi ahụ iji mee ka ojiji nke ihe na-arụ ọrụ site na nyocha ọnụ ọgụgụ, akara, ịza ajụjụ na ịkekọrịta.
WittyParrot nwere interface wijetị nke dị mfe iji maka onye ọ bụla nọ na nzukọ ahụ. Onye ọrụ nwere ike ịchọpụta ma tinye ntinye nke ozi ha, onyonyo ma ọ bụ akụ faịlụ ndị ọzọ na wijetị:
WittyParrot nwekwara ngwaahịa dị iche iche, nke a bụ nke Oracle:
Rịọ Witty Parrot Demo
Tags: ọdịnaya managementnchekwa ọdịnayanjikwa ihe ọmụmaihe omumandị ọrụ ihe ọmụmaOraclenjikwa ọdịnaya oracleparty osikapanwaanyi
Zere Inye Ejide Gị site na Alọ Ọrụ